La dagaalanka Musuq-maasuqa Galmudug | KEYDMEDIA ENGLISH
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa ku dhawaaqay inuu la xisaabtamayao wasiiraddiisa, islamarkaana tallaabo sharci ah laga qaadi doono mas'uul kasta oo Maamulka katirsan, oo lagu helo musuq-maasuq.
Wuxuu xusay in Galmudug aysan xamili karin musuq-maasuq, maadaama ay tahay maamul cusub, oo dib u dhiskiisa laga shaqeynayo, kaasoo ku tiirsan deeqaha dhaqaale ee la siiyo, maadaama uusan lahayn illo dhaqaale iyo xaruumo ay Wasiiradda ku shaqeeyaan.
Madaxweynaha ayaa ugu baaqey Baarlamaanka inuu xoojiyo la-xisaabtanka Wasiiradda, oo ay u yeeraan mid kasta mar si su'aallo looga waydiiyo shaqooyinka uu qabto iyo mashaariicda uu gacanta ku hayo ee lagu horumarinayo degaanka.
Qoor Qoor ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ka dhacday xarunta Madaxtooyadda, oo isaga uu ku saxiixay sharcyo dhowr ah oo ay horay u meel mariyeen Xildhibaannada Baarlamanka Galmudug.
Soomaaliya ayaa sanad kasta safka hore ka gasha dalalka ugu musuq-maasuqa badan dunida, taasoo loo sababeeyay isla-xisaabtan la'aanta iyo inaysa jirin hay'ado dowli ah oo awood leh.
Comments Topics: galmudug musuq-maasuq qoor qoor